Warbaahinta UK oo ka carooday Madaxweyne Garguurte - maxay ka qoreen
Top:- Warbaahinta UK oo ka carooday Madaxweyne Garguurte - maxay ka qoreen
13 May 2013 Waagacusub.com-Wargeysyada England ayaa daabacay qoraallo ay kaga carreysan yihiin qarashkii ku baxay socdaalka madaxweyne Xasan Garguurte ee shirkii London iyo sida uu ugu raaxeestay London. Wargeyska The Sun ayaa qoray in Madaxweyne Hassan uu ku raaxeestay mid ka mid ah hoteelada ugu qaalisan London - Ayada oo la isticmaalayo waxa uu ugu yeeray "lacagta canshuur bixiyayaasha Britain"
Madaxweynaha ayaa degay hotelka Dorchester, ayada oo ay wehliyaan shan wasiir iyo 14 kaliyeyaal ah, intii uu ka qeyb galay shirkii deeqaha loogu ururiyay Somalia ee London.
Sida ay ku warrantay The Sun, madaxweyne Xasan oo 57 jir ah ayaa afar cisho ku negaaday qeebta Park Lane. Xittaa haddii ay degi lahaayeen qolka ugu qiimaha jaban, waxaa ku kici lahaa 25,440 gani, ayay tiri The Sun.
Shaqsiyaadkii horey ugu raaxeystay hotel-kaas waxaa ka mid ahaa Marlene Dietrich,t aajirka caanka ah ee Mareykanka ee Walt Disney oo ah ninka leh shirkadda Disney iyo Taleefishinada ESPN iyo ABC, jilaaga caanka ah ee Clint Estwood, Charlton Heston iyo Judy Garland.
Qiimaha ku baxay duulimaadka waftiga madaxweyne Xasan oo raacay qeybta First Class, ayaa ahaa sidoo kale 24,158 oo gani.
Qofkiiba waxa uu maalinkii wadanayay baabuur lagu kireeyay 400 oo Gani, taasi oo qiimaha guud ee ku kacay safarka ka dhigeysa 50,000 oo gani.
Natiijadii socdaalkaas ka dhalatay, ayaa noqotay in Britain ay Somalia ugu deeqday sidoo kale 50 milyan oo gani.Halkaan ka akhri
Sedexdaan nin ee nool ilaahbaa qabiil ka dhaliyee,run sheegistoodu waa mid aan qalbigeeyga marna ka go''i doonin.
Dahir Alasow, A senior Radio and TV journalist, a leader of a press watchdog ASOJ, the editor in Chief of waagacusub.com,member of European Journalists and outstanding commentator with fearless check on actions of the political groups and others players through investigative journalism, plus defender of the public interest and voice to the voiceless through "the truthful tip of his truth pen"